Iraan oo loogu baaqay in wakhtiga kordhiso - BBC Somali
Iraan oo loogu baaqay in wakhtiga kordhiso
Wasiirada arrimaha dibeda ayaa isku daya in ay heshiis ka gaaraan Barnaamijka niyuukliyarka ee muranka dhaliyey ee Iran ka hor inta aanay dhamaan maanta oo ay ahayd mudadii kama dambeysta ahayd ee loo qabtay in heshiis lagu gaaro.
Diplomasiinta ayaa weli ku warama ay jiraan kala qeybsanaan ama kala foganaasho aad u daran, wadahadalada ka socda magaaalada Vienna, waxaana laga yaabaa in ay isla meel dhigaan is afgarad ku meel gaar ah.
Lixda waddan ee awood leh ee kala ah Maraykanka, Britain China, Jarmalka iyo fransiiska ayaa doonaya in Iraan ay hoos u dhigto xadiga taya kordhinta macdanta ureeniyamka oo ay taasi ku badalato in laga qaado cunaqabateenada ay ku soo rogtay Qaramada midoobe.
Iraan waxay ku doodaysaa in Barnaamijkeeda yahay mid nabad gelya ah oo ay ku doonayso in ay ku dhaliso tamarta .
Axadii, sarakiisha Tixraan ayaa waxa ay ogolaadeen dibed baxyo dif iyo nadir ah oo ay sameeyeen kuwa mowqifkooda uu fogaaday, kuwaasi oo ku cambaareeyey dowladda in ay in ay debacday cadaadiska reer galbeedka
Waxa sidoo kale kumay wasiirka arrimaha dibeda ee Maraykanka iyo Dhigiisa dalka Sacuudiga.
Inkastoo sacuudiga aanu qeyb ka ahayn waddamada kulmaya balse haddana waxa uu sacuudiga ka walaacsanyahay saameynta Iraan ay ku yeelanayso gobolka.
Waxa maanta la filayaa in uu gaaro Vienna wasiirka arrinta ee Shiinaha.